म बाच्न चाहान्छु -मलाई बचाउनुहोस ! बिचरा यी बालकको दर्दनाक जीवन,हेर्नुहोस भिडियो::Nepal's Online News Portal
म बाच्न चाहान्छु -मलाई बचाउनुहोस ! बिचरा यी बालकको दर्दनाक जीवन,हेर्नुहोस भिडियो
मङ्ल, फाल्गुन ७, २०७५
काठमाडौं – हेरेक ब्यक्तिलाई रोग लाग्छ तर बिबेक अर्याललाई यस्तो रोग लाग्यो जुन रोग लाखौं मध्यमा एक जनामा देखा पर्छ । जे सोचिन्छ त्यो हुँदैन जिबनमा भन्ने भनाइ झै अर्गखाँचीका तीन बर्से बालक बिबेक अर्याल लाई यस्तो रोग लागेको छ । बाबु बाबुराम अर्याल भन्छन ३ बर्षको भयो एक सितो भात् पनि खाएको छैन, घाटिमा भएको समस्याको करणले र जिब्रो ठुलो भएर बहिर नै निस्केको करणले उस्ले अन्य खानेकुरा हरु खान सक्दैन ।
दुखी हुँदै बाबु बाबुराम भन्छन -तिन बर्ष सम्म दुध र दाल ख्वाएर बच्चाएको छु । खान भोक लाग्दा केही खान नसक्दा म बाबु हुनुमा धिक्कार हो जस्तो महसुस हुन्छ । धेरै नेपालीले गरेको सहयोग बाट बाबुको उपचार भइरहेको छ, यदी हजुरहरु कसैले सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने धुन नेपालमा राखिएको भिडियोको तल ठेगाना तथा फोन नम्बर साथै बैक खाता नम्बर पनि लेखिएको छ ।
हेर्नुहोस् पुरै भिडियो यो बाबु कस्तो हालतमा छ भनेर :
स्वास्थ्य-जीवनशैली बाट अन्य
काठमाण्डौ-घर त मेरो रामेछाप जिल्ला, कलियुगकि केटि चन्चले नानि लगाएतका गीतहरुबाट अशंख्य श्रोता तथा दर्शकहरुको मन मुटुमा बस्न सफल गायक तथा सर्जक रामकुमार कार्कीले फेरी अर्को गीत बजारमा लिएर आएका छन् ।कुनै पनि लोक...
काठमाडौं – नेपाली गितसंगितको क्षेत्रमा एकाएक कहलिएको नाम हो सुनिल कटुवाल । कपुरी “क” गितबाट चर्चाको सिखरमा चडेका गायक सुनिल कटुवालले पहिलो हिमालयन अवार्ड र सोही गितबाट अर्को ओएस अवार्ड हात पार्न सफल भएका...
काठमाडौं-विशेष फिल्मसको अफिसियल युटुबमा भखरै मात्र सार्वजनिक भएको “ओंए चम्फा”गीतमा शोभा थापा र कमल खत्रीको सुमधुर स्वरमा रहेको छ । गायक गायिका स्वयमको शब्द तथा विजय थापाको लय रहेको यस गीतमा र्र्याप भने...
काठमाडौं-पछिल्लो समयमा लोकदोहोरी क्षेत्रमा एक पछि अर्को आशलाग्दा गितहरुको आगमन भै नै रहेको छ । लगानी अनुसार आम्दानी हुँदै नभए पनि लगानी गर्ने जमात कमि भने छैन । अहिले बिबाह पार्टी भोज भतेरमा हिन्दी...
प्रवासी नेपाली हातेमालो कल्याणकारी समाज बिधान सहित राजदूतावासमा ।
प्रवासी नेपाली हातेमालो कल्याणकारी समाज बिधान सहित राजदूतावासमा । भिम लुहार मलका मलेसिया प्रबासी नेपाली हातेमालो कल्याणकारी समाज मलेसिया ले मलेसिया स्थित राजदुतावास क्वालालम्पुरमा आफ्नो संस्था को बिधान बारे जानकारी गराएको छ । आजै प्रवासी नेपाली...
वर्षौ हराएकी चर्चित गायिका विष्णु माझि माथि “अनुसन्धान”(भिडियो)
काठमाडौँ- बिष्णु माझीले आवाज दिएको पछिल्लो समय युटुब देखि सर्बत्र रुचाईएको आवाज हो । नेपाली लोक संगीतका बादसाह सबैका मनका ढुकढुकी बहुचर्चित गायिका विष्णु माझी र नव गायक अशोक बिकको सुमधुर आवाज रहेको धुन...
सर्जक एकनारायण भण्डारीलाइ फाप्यो छिपछिपे पानीमा लेउ,हप्ता दिनमै ८ लाख भन्दा बढीले हेरे
कमल सरगम-काठमाण्डौ।बिष्णु माझीले आवाज दिएको पछिल्लो समय युटुब देखि सर्बत्र रुचाईएको गीत छिपछिपे पानीमा लेउ हप्ता दिन बित्न नपाउदै ८ लाख भन्दा बढी दर्शकले गीतलाई माया गरेका छन। नेपाली लोक संगीतका बादसाह सबैका मनका...
काठमाडौं। नेपालमा यसै वर्ष सुरु भएको फ्रेन्चाइज शो ‘को बन्छ करोडपती’ ले पहिलो पटक करोडपति पाएको छ । शोले गरेको घोषणामा पहिलो करोडपति विराटनगरका राजीव जैन हुन् । जैन एमबीए डिग्री होल्डर हुन् साथमा...
पहीलो करोड पती विजेता राजीव जैनलाई गरिएको १२ कडा प्रश्न,उतर दिन नसकेर भए असिनापसिना